TOVP ၏ရက်သတ္တပတ်၏စာအုပ်မော်ကွန်း - ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း
အမျိုးအစားမှမော်ကွန်းတိုက် "TOVP ၏တစ်ပတ်တာစာအုပ်"
စစျပှဲ ၂၅၊ ၂၀၂၁ က Sunanda Das
Life from Comes: Morning Balk with AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada Morning Walks with AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada in this morning walk conversation in Venice Beach, Los Angeles, 1970's in the middle of 1970's, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada reveals the Vedic နားလည်မှုကိုပြသသည်။ အသိစိတ်နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ အမှန်တော့ရုပ်နဲ့စိတ်နှစ်ခုလုံးပါပဲ
ထုတ်ဝေသည် ရက်သတ္တပတ်၏ TOVP စာအုပ်
TOVP အပတ်စဉ်စာအုပ် #20
မယုံကြည်နိုင်သောအရာကိုရယူခြင်း၊ Ashish Dalela (Rishiraja Dasa) မှ Vedanta Sutra အပေါ်သိပ္ပံနည်းကျဝေဖန်ချက်တစ်ခုဘဝနှင့်စကြဝာသည်သတိလက်လွတ်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကငါတို့တော်တော်များများလမ်းတစ်လျှောက်မှာသင်ပေးခဲ့တဲ့တရားဝင်ပုံပြင်ဘဲ။ ဒါပေမယ့်သိပ္ပံပညာကဘာကိုပြောတာလဲ။ ပုံဆွဲနေသည်
TOVP အပတ်စဉ်စာအုပ် #19
ေသာ၊ ဩန္တာ ၂၀၊ ၂၀၂၁ က Sunanda Das
Thomas Y. Lo, Paul K. Chien, Eric H. Anderson, Robert A. Alston, Robert P. Waltzer တို့၏အတိုချုပ်အားဖြင့်အသိဥာဏ်ဒီဇိုင်းသည်အသက်နှင့်စကြဝာသည်သတိမဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်သည်။ နှင့်ဇီဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်? အဲဒါကငါတို့တော်တော်များများလမ်းတစ်လျှောက်မှာသင်ပေးခဲ့တဲ့တရားဝင်ပုံပြင်ဘဲ။ ဒါပေမယ့်
TOVP အပတ်စဉ်စာအုပ် #18
ေသာ၊ ဩအတိုင်ပင်ခံ ၀၆၊ ၂၀၂၁ က Sunanda Das
၅ ကြိမ်မြောက် Canto Bhagavatam Cosmology တွင် Dr. Dane Holtzman (Danavir Goswami) ၏ဤ Sanskrit ဂန္ထဝင်ကို His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada ကသူ၏ Srimad-Bhagavatam ၏ပဉ္စမ Canto အတွက်ရည်ရွယ်ချက်အားကိုးကားရေးသားထားသည်။ ယခုတွင် Srila Sridhara Svami, Sri Viraraghavacarya, Srimad Vijayadhvaja Tirtha, အပါအ ၀ င်ဝေဖန်ချက်များပါသည့်အကျဉ်းချုပ်တစ်ခုလုံး
TOVP ၏အပတ်စဉ်စာအုပ် #17
နွေ, ဇူလိုင် 25, 2021 က Sunanda Das
ဘုရားသခင်၊ အသိဉာဏ်ရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းမှုကို TD Singh မှ (Bhaktiswarupa Damodar Swami) ဘုရားသခင်ကသိပ္ပံနည်းကျဒေါသလွှမ်းမိုးမှုပိုများလာသောကမ္ဘာကြီးတွင်ဘုရားသခင်မလိုအပ်တော့ပါသလော။ သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်လျက်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာ၏တွေ့ရှိချက်များကဘုရားသခင်တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းကိုနည်းလမ်းသစ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိအားပေးစေပါသလား။ အဆိုပါသိပ္ပံနည်းကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါတယ်
TOVP ၏အပတ်စဉ်စာအုပ် #16
သော, ဇူလိုင် 16, 2021 က Sunanda Das
Mystic iverseာ - ဝေဒCosာဗေဒဆိုင်ရာနိဒါန်း Ashish Dalela မှ (Rishiraja Dasa) ဝေဒနက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာယခင်လက်ရာများနှင့်မတူဘဲစကြာ ၀ modelာ၏ပုံစံကိုသဘာဝသီအိုရီနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိဘဲဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲစကြဝedာ၏ပုံစံကိုဆွေးနွေးခြင်းသည်ဤစာအုပ်သည်နမူနာကိုမဖော်ပြမီသီအိုရီကိုဆွေးနွေးထားသည်။ စာအုပ်တွင်သိပ္ပံပညာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းတရားများကိုဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်
TOVP ၏အပတ်စဉ်စာအုပ် #15
သောဇူလိုင် 09, 2021 က Sunanda Das
ဘုရားသခင်နှင့်သိပ္ပံ - ဘုရားသခင့်အကြောင်းတရားနှင့်သဘာဝနိယာမများ Sadaputa Dasa (Dr. Richard L. Thompson) မှခေတ်သစ်သိပ္ပံလောကတွင်ရိုးရာဘာသာတရားသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာအမှန်တရားအပေါ်ခေတ်နောက်ကျနေသောအတွေးအခေါ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အဝိဇ္ဇာ၏အင်အားဟုမကြာခဏမြင်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သိပ္ပံပညာသည်သိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမြင်သည်
TOVP ၏အပတ်စဉ်စာအုပ် #14
စ, ဇူလိုင် 03, 2021 က Sunanda Das
၁၉၉၆ တွင် Darwin ၏ Black Box သည် Lehigh တက္ကသိုလ်မှဇီဝဓါတုဗေဒပညာရှင် Michael Behe ကိုအမျိုးသားရေးအာရုံစိုက်မှုအဖြစ်သို့ထိုးဖောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာအုပ်နှင့်သူ၏နောက်ဆက်တွဲနှစ်စောင်သည်ဝေဖန်မှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးသူ၏တုန့်ပြန်မှုများသည် New York Times မှသိပ္ပံဘလော့ဂ်များအထိ၊
TOVP ၏အပတ်စဉ်စာအုပ် #13
နှင်း, ဇွန် 27, 2021 က Sunanda Das
ရှေးဟောင်းဝေဒအင်ပါယာ၏နက်နဲသောအရာများ - ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအခြားယဉ်ကျေးမှုများသို့ဝေဒူထည့်ဝင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းစတီဖင်နပ်ပါ (သီရိနန်ဒန်ဒန်ဒါ) မှဝေဒယဉ်ကျေးမှုကိုပညာရှင်များစွာကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂,၀၀၀ ၏နောက်ဆုံးရေခဲမြစ်ပြီးနောက်ရှုပ်ထွေးမှုအရှိဆုံးသောယဉ်ကျေးမှုများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံခဲ့သည်။ ။ ၎င်းသည်ရှေးအိန္ဒိယ၌ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အဖြစ်ဖြစ်သည်